မုတ်သုံမိုးဦး: မာရီလင် မွန်ရိုး ဘ၀နိဂုံးမှ ရွှေရတုတိုင် ...........အပိုင်း ( ၂ )
ရေးသူ (Spring Flowers)
အမေရိကန်အစိုးက ယခင် ထိမ်ချန်လျို့ဝှက်ထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပေးရတဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဥပဒေ Freedom of Information Act ဆိုတာ ၁၉၉၇ မှာ ပေါ်လာပါတယ် ။ ဒါကြောင့် FBI က ဟိုးအရင်က လျို့ဝှက် အမှုတွဲတွေကို ၂၀၀၆ မှာ ထုတ်ပေးခဲ့ရာမှာ မာရီလင်မွန်ရိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေလည်း ပါခဲ့တယ် ။ အဲဒီစာတွေမှာ သမ္မတရဲ့ ညီ Robert Kennedy နဲ့ မွန်ရိုးတို့ ဆက်ဆံရေးကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတယ် ။ အဓိက လိုရင်းကို ပြောရရင် ရောဘတ်က သူ့မိန်းမကို ကွာရှင်းပြီး မွန်ရိုးကို ယူပါမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ဖူးသတဲ့ ။
မှတ်ချက် ။ ။ FBI = Federal Bureau of Investigation အမေရိကန် '' နိုင်ငံတွင်း '' ထောက်လှမ်းရေး
CIA =Central Intelligence Agency အမေရိကန် '' နိုင်ငံအပြင်ဘက် '' ထောက်လှမ်းရေး
Robert Kennedy မင်္ဂလာပွဲ
ရောဘတ်နဲ့ သူ့မိန်းမ Ethel Kennedy
ဒါပေမယ့် အဲဒီကတိကို ရောဘတ်တစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ အကောင်အထည်ဖော်မှာ မဟုတ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတဲ့ မွန်ရိုးဟာ သူတို့ရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းဇာတ်လမ်းကို မီဒီယာမှာ ထုတ်ပြောပစ်လိုက်မယ်လို့ ချိန်းခြောက်သတဲ့ ။ ဒီတော့ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ်လည်း ဖြစ် ၊ အသားအရောင် မခွဲခြားရေး တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်သူ civil rights activist လည်း ဖြစ်တဲ့ ရောဘတ်အတွက် မွန်ရိုးဟာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုတယ် ။ လုပ်ကြံသူများရဲ့ အကြံက '' မွန်ရိုးဟာ ခဏခဏ ဟန်ဆောင် သေကြောင်းကြံရင်း နာမည်ကြီးအောင် လုပ်တတ်တယ် ၊ ဒီတော့ ဒီတခါ အဲလို သေကြောင်းကြံအောင် အားပေးအားမြှောက် ပြုမယ် ၊ ဒါပေမယ့် အရင်ကလို ပြန်သတိရလာတာမျိုး ၊ အချိန်မီ ဆေးရုံရောက်တာမျိုး မရှိစေရ '' ။
အဲဒီ FBI စာရွက်စာတမ်း ( အစီရင်ခံစာတွေ ) အရ မွန်ရိုးသေမှု မှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ကြံရာပါတွေကတော့ Robert Kennedy ( သမ္မတရဲ့ ညီ ) ၊ Peter Lawford ( ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသားလည်း ဖြစ် ၊ ကနေဒီညီအစ်ကိုရဲ့ ယောက်ဖလည်းဖြစ်သူ ) ၊ မွန်ရိုးရဲ့ စိတ်ကုဆရာဝန် Dr. Greenson ၊ မွန်ရိုးရဲ့ အိမ်ဖော် Eunice Murray ၊ မွန်ရိုးရဲ့ အတွင်းရေးမှုး Pat Newcomb တို့ ပါကြတယ် လို့ ဆိုတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီ FBI အစီရင်ခံစာတွေ ရဲ့ အစမှာ '' ဒီသတင်းတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို သတင်းရေးတဲ့သူက မသိပါ ၊ ဒါကြောင့် မှန်၊ မမှန် အတည်မပြုနိုင်ပါ '' လို့လည်း ပါတယ် ။ ( ရေးတုန်းက ရေးပြီး ....ဟွန်း )
ကနေဒီ ညီအစ်ကို သုံးယောက်
ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ရေးထားတာနဲ့ မွန်ရိုးသေမှုမှာ စစ်ဆေးခြင်းခံရတဲ့ မျက်မြင်သက်သေတချို့ရဲ့ ထွက်ဆိုမှုနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိပါတယ် ။ သေတဲ့နေ့မှာ ရောဘတ်ဟာ လူစိမ်းနှစ်ယောက်နဲ့ မွန်ရိုးအိမ်ကိုရောက်လာပြီး လူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ ဆေးသေတ္တာနက်ပုံစံတစ်ခုလည်း ပါတယ်လို့ ဆိုတယ် ။ မသေခင်တစ်ရက်အလိုမှာ မွန်ရိုးဆီကို ရောဘတ်နဲ့ မပတ်သက်ဖို့ ဆဲရေးပြောဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်ဖုန်းတွေ ၀င်လာတယ် လို့လည်း နီးစပ်သူတစ်ယောက်က ထွက်ဆိုတယ် ။
နောက်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုကတော့ မာဖီးယားဂိုဏ်းက သမ္မတနဲ့ သူ့ညီကို မကျေနပ်လို့ သူတို့ အချစ်တော် မွန်ရိုးကို ရှင်းပစ်ခြင်းအားဖြင့် လက်စားချေတာလို့ ဆိုတယ် ။
မွန်ရိုးဘယ်လိုပင်သေသေ သေချာတာတစ်ခုကတော့ သူနဲ့ ကနေဒီ ညီနောင်တို့ ပတ်သက်မှုဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အန္တရာယ်ကို လက်ယပ်ခေါ်သလို ဖြစ်နေတာပါဘဲ ။ သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာထက် ဟောလိဝုဒ်က အဖော်အချွတ်မင်းသမီးနဲ့ ဖောက်ပြန်မှုဟာ လူထုအမြင်စောင်းနိုင်ပြီး သမ္မတရဲ့ နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲကို ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ သမ္မတနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ထင်မြင်လာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
ဒီထက်မက ပြသာနာကတော့ မွန်ရိုးဟာ နိုင်ငံရေးကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီး အမေရိကန်ကွန်မြူနစ် ၊ ရုရှားကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ မကြာခဏ ဆွေးနွေးစကားပြောနေတာကို တွေ့ရတတ်တယ် ။ ဒီတော့ FBI ဟာ မွန်ရိုးကို မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်လာတာ မဆန်းပါဘူး ။ အချိန်ကလည်း အမေရိကန်နဲ့ သူနဲ့ ရန်သူတော် ဆိုဗီယက်တို့ စစ်မဖြစ်ရုံတမယ် တင်းမာတဲ့ စစ်အေးကာလ Cold War ရဲ့ အထွတ်အထိပ် အချိန် ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် ခရူးရှက်ဗ် Khrushchev ခရူးရှက်ဗ် အတွက် ကျင်းပတဲ့ ပွဲတခုမှ မာရီလင်မွန်ရိုး
စစ်အေးကာလမှာ အမေရိကန်နဲ့ ဆိုဗီယက်အကြား တခြားတင်းမာမှုတွေရှိပေမယ့် မွန်ရိုးနဲ့ ကနေဒီညီအစ်ကိုတို့ တွဲနေတဲ့ ၁၉၆၂ ရဲ့ တင်းမာမှုကတော့ အဆိုးဆုံး ဖြစ်ပြီး တတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ဖို့ တဲတဲလေးသာ လိုတဲ့ ကာလ လို့ ဆိုကြတယ် ။ မွန်ရိုးကလည်း သေမယ့်နှစ်ကျမှ စစ်ထဲဝင် ဆိုသလို အန္တရာယ်များတဲ့ အချိန်မှာ အန္တရာယ်များတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တွဲမိပြီး အန္တရာယ်များတဲ့ အကြောင်းတွေကိုမှ သွားပြောမိသတဲ့ ။ အဲဒီအကြောင်းကို တိုတိုနဲ့ လိုရင်း ပြောပြချင်ပါတယ် ။
ကနေဒီ John F.Kennedy ဟာ ၁၉၆၁ မှာ သမ္မတရာထူးကို ရခဲ့တယ် ။ သမ္မတဖြစ်ပြီး သုံးလတောင်မကြာခင် အမေရိကန်အောက်နား ပင်လယ်ထဲက ကျူးဘား ( Cuba ) ဆိုတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံသေးသေးလေးမှာရှိတဲ့ ကွန်မြူနစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ စစ်ဆင်ရေး ( ၂ ) ခု လုပ်ခဲ့တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျူးဘား ၀န်ကြီးချုပ်က ဖီဒယ်ကက်စထရို Fidel Castro ( ယနေ့ထိ အသက်ရှင်ဆဲ ) ပါ ။
ယခင်က ကျူးဘားခေါင်းဆောင် Fidel Castro ယခု Fidel Castro ( ကျူးဘားရဲ့ အခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်ကလည်း Fidel Castro ရဲ့ ညီ Raul Castro ဖြစ်ပါတယ် ။ )
အဲဒီ ကက်စထရို Fidel Castro နဲ့ ဆိုဗီယက် ၀န်ကြီးချုပ် ခရူးရှက်ဗ် Khrushchev နဲ့ က ကွန်မြူနစ်အချင်းချင်းမို့ အလွမ်းသင့်တယ် တဲ့ ။ အမေရိကန်က ကျူးဘားမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒဟာ တောင်အမေရိကတစ်ခုလုံးကို ပြန့်သွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်တယ် ။ ဒါကြောင့် ဖီဒယ် ကက်စထရိုကို ဖြုတ်ချပြီး သူတို့နဲ့ အလွမ်းသင့်မယ့် အစိုးရကို တင်ချင်တယ် ။ ဒါကြောင့်ဘဲ ကနေဒီ မတိုင်မီ သမ္မတ အိုင်ဆင်ဟောင်ဝါ လက်ထက်ကတည်းက အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး CIA က ကျူးဘားအစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ် ။ ကနေဒီလက်ထက်မှာ ဆက်ပြီး စစ်ဆင်ရေး ( ၂ ) ခု လုပ်တယ် ။ တစ်ခုက ကျူးဘားနိုင်ငံသား ပြည်ပြေးတွေကို CIA က လေ့ကျင့်ပေးပြီး ကျူးဘားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကို သိမ်းဖို့ အကူအညီပေးခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျူးဘားကလည်း မခေပါဘူး တဲ့ ။ ဆိုဗီယက်အပါအ၀င် တခြား ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေက လက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ကျူးဘားစစ်တပ်က ကျူးကျော်သူတွေကို သုံးရက်နဲ့ အပြတ်ချေမှုန်းလိုက်နိုင်သတဲ့ ။ အဲဒီ အမေရိကန် ရှုံးတဲ့ စစ်ဆင်ရေးကို Bay of Pigs ဆိုတဲ့ ပင်လယ်အော်နားမှာ ဖြစ်လို့ Bay of Pigs Invasion လို့ ခေါ်ပြီး ၁၉၆၁ ဧပြီလမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ ။
နောက် ( ၇ ) လအကြာ ၁၉၆၁ နိုဝင်ဘာမှာ တစ်ခါ Mongoose Operation ဆိုပြီး စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု အမေရိကန်က လုပ်ပြန်တယ် ။ ဒီတခါတော့ ၀ါဒဖြန့်တာရော ၊ ရန်သူရဲ့ စိတ်ကို လွှမ်မိုးပြီးကိုယ်လိုချင်တာကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးတွေရော ၊ ရန်သူကို အင်အားနည်းလာအောင်လုပ်တဲ့ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးနည်းတွေရော နည်းမျိုးစုံသုံးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီတခါလည်း မအောင်မြင် ။
အဲဒါတွေလည်း ပြီးရော ကျူးဘားက စိတ်ဆိုးပြီး ကွန်မြူနစ်ဘိုးအေ ဆိုဗီယက် အကူအညီနဲ့ ကျူးဘား နိုင်ငံတွင်းမှာ ဒုံးကျည်တွေ တည်ဆောက်ပါလေရော ။ CIA ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေအရ အဲဒီဒုံးကျည်တွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးနီးပါးကို ဖျက်ဆီးနိုင်လောက်အောင် အားကောင်းတယ်ဆိုတာ သိရတော့ အမေရိကန် မျက်လုံးပြူးသွားသတဲ့ ။ သူတို့ အလှည့်ကျ ပြူးတယ်နော် ။ အဲဒီမတိုင်ခင် အမေရိကန်က ဆိုဗီယက် ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဆိုပြီး ဒုံးချည် ၁၀၀ လောက်ဆောက်ပြီး အီတလီ ၊ အင်္ဂလန်နဲ့ တူရကီတွေမှာ ဖြန့်ကျက်တပ်ထားတာတော့ မပြောဘူး ။
တိုတိုပြောရရင် အခု ကျူးဘားမှာ လာတပ်တဲ့ ဆိုဗီယက် ဒုံးကျည်တွေကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ ဆိုဗီယက်တို့ ကြား အခြေအနေအရမ်းအရမ်းကို တင်းမာလာပြီး အကိုင်အတွယ် မတတ်ရင် နူးကလီးယားစစ် သို့မဟုတ် တတိယကမ္ဘာစစ်ထိ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အထိ ကြီးကျယ်သွားနိုင်တယ် ။ ဒီအရေးအခင်းကို ဖြေရှင်းဖို့ အစပိုင်းမှာ အမေရိကန်က လေကြောင်း ၊ ရေကြောင်းတွေနဲ့ ချမယ် ဆိုပြီး လုပ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်တော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျူးဘားကို စစ်ရေးအရ ပိတ်ဆို့ဖို့သာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ ကျူးဘားထဲဝင်သမျ လမ်းကြောင်းတွေကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး ကျူးဘားမှာ ဆောက်နေဆဲ နဲ့ ဆောက်ပြီး ဒုံးကျည်တွေကို ဖျက်သိမ်းပေးပါလို့ ဆိုဗီယက်ကို တောင်းဆိုပါတယ် ။
ကနေဒီ ( ဘယ် ) နဲ့ ဦးသန့်
အဲဒီအချိန်က ကုလသမ္မက အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် က မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးသန့် ပါ ။ ဒီအန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ တင်းမာမှုကြီး လျော့ကျအောင် ကြိုးပမ်းရာမှာ ဦးသန့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ အများကြီးပါခဲ့တယ် ။
ကုလသမ္မဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ ဦးသန့်ဟာ အမေရိကန်ကိုရော
ဆိုဗီယက်ကိုပါ အစွန်းရောက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မချမိအောင်
ဖြောင်းဖျတိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့တယ် ။ တကယ်တော့ နှစ်ဖက်စလုံးဟာ သူတို့ ရောက်နေတဲ့
အခြေအနေ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ကြီးမှန်း သိပေမယ့် အလျှော့ပေးမယ့် အရေးကို ခက်နေကြတယ်
။ ဦးသန့်သာ ကြားထဲက လိမ္မာပါးနပ်စွာ ပါဝင်မှု မရှိခဲ့ရင် နှစ်ဖက်စလုံးဟာ
ရှေ့တိုးရခက် နောက်ဆုတ်ရခက် အခြေအနေကနေ ဘယ်လို ဖြစ်ကြမယ် မသိ ။
ဦးသန့် ( တတိယမြောက် ကုလသမ္မဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးချုပ် .... ၁၉၆၁ ကနေ ၁၉၇၁ ထိ ရာထူးသက်တမ်း နှစ်ကြိမ် တာဝန်ထမ်းခဲ့တယ် ။
ဦးသန့် ဟာ ကနေဒီနဲ့ ပေါင်းပြီး ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် ခရူးရှက်ဗ်ဆီက သဘောတူညီချက်တွေ ရခဲ့တယ် ။ သဘောတူညီချက်က လူသိရှင်ကြားနဲ့ လျို့ဝှက် ဆိုပြီး ပုံစံ နှစ်မျိုးနဲ့ ပါ ။ လူသိရှင်ကြား သဘောတူညီချက်အရ ဆိုဗီယက်က ကျူးဘားမှာ တပ်ထားတဲ့ ဒုံးကျည်တွကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး ဆိုဗီယက်ကို ပြန်သယ်သွားခဲ့တယ် ၊ အဲဒီအတွက် အမေရိကန်က ကျူးဘားကို ဘယ်တော့မှ မကျူးကျော်ပါဘူး လို့ ကတိပေးရတယ် ။ လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်ကတော့ အမေရိကန်က တူရကီနဲ့ အီတလီမှာ သွားတပ်ထားတဲ့ ဒုံးကျည်တွေကို ဖြုတ်ပေးရပါတယ် ။ ( အမေရိကန်က အထက်ကချည်း နေချင်ပုံဘဲနော် ....သူ့ကျတော့ လျှို့ဝှက်၊ သူများကျတော့ ပေါ်တင် )
အရေးအခင်းပြီးတော့ ကနေဒီ က ဆိုတယ် .....'' ဦးသန့်ရဲ့ ကျေးဇူးကြွေးတွေဟာ
ကမ္ဘာကြီးအပေါ် များစွာ တင်သွားပါပြီ U Thant has put the world deeply in his
debt . '' တဲ့ ။
ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် ခရူးရှက်ဗ်နဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ကနေဒီ
ဦးသန့်နဲ့ ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် ခရူးယှက်င်္ဗ ( ယာ )
ဒီကျူးဘားအရေးအခင်းမှာ အဲဒီလို အမေရိကန်က လူပုံအလယ် မျက်နှာမပျက်ရဘဲ ရှင်းလိုက်နိုင်တာကြောင့် တဖက်မှာတော့ ဆိုဗီယက်က သူခင်းတဲ့ ဇာတ်ကို မနိုင်သူ အဖြစ် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာပျက်ရတယ် ။ ၀န်ကြီးချုပ် ခရူးရှက်ဗ်လည်း ဒီကိစ္စကြောင့် သိက္ခာတွေ အကြီအကျယ်ကျရပြီး နောက် ( ၂ ) နှစ်အကြာမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးက ပြုတ်ပါတယ် ။
ဒီအတိုချုပ်ကလေးကို ဖတ်ကြည့်ရင် သမ္မတကနေဒီဟာ မွန်ရိုးနဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေတဲ့ ၁၉၆၂ မှာ ဘယ်လောက်ခေါင်းစားနေမလဲ ဆိုတာ မှန်းလို့ ရပါပြီ ။ ဘာကြောင့် FBI က ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ တွဲနေတဲ့ မွန်ရိုး ၊ ကနေဒီနဲ့ အကျွမ်းဝင်နေတဲ့ မွန်ရိုးကို မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေရသလဲ ဆိုတာ မှန်းလို့ရပြီ ထင်ပါတယ် ။ FBI အစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာ မွန်ရိုးဟာ ကနေဒီနဲ့ တွေ့စဉ် နူးကလီးယားစမ်းသပ်မှုရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး တွေကို ဆွေးနွေးတယ် လို ဆိုတယ် ။ သမ္မတက မွန်ရိုး သူ့ဆီကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆက်သွယ်လို့ ရအောင် အမေရိကန်တရားရေး ဌာန ကတဆင့် ခေါ်လို့ရတဲ့ ဖုန်းနံပါတ် အထိပါ မွန်ရိုးကို ပေးထားတယ်ဆိုတာကလည်း မွန်ရိုးနဲ့ ကနေဒီ ရင်းနှီးမှုအတိုင်းအတာကို ဖော်ပြနေပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ မွန်ရိုးဟာ သမ္မတရဲ့ security risk ဖြစ်လာတာကြောင့် နှုတ်ပိတ်ခံရတာ ၊ သို့မဟုတ် သမ္မတနဲ့ ရင်းနှီးရာက မသိသင့်တာတွေ သိလာတယ် ၊ သိလွန်းတာကြောင့် နှုတ်ပိတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်ဟာ ယနေ့ထိ တိုင်ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
မွန်ရိုးနဲ့ ကနေဒီ ညီအစ်ကို
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ ( သူနဲ့ ရင်းနှီးသူ တစ်ယောက် ပြောသလို ) မှားယွင်းစွာ မွေးလာတဲ့ မွန်ရိုး ၊ ငယ်စဉ်က မွေးစားအိမ်တွေ လှည့်နေခဲ့ရတဲ့ မွန်ရိုး ၊ အမြဲ အထီးကျန်ဆန်ခံစားနေရတတ်တဲ့ မွန်ရိုးဟာ ဘ၀အဓိပါယ်ကို မှားယွင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှာရင်း သေခဲ့တယ် ၊ လှပစွာ ၊ အထီးကျန်စွာ နဲ့ ပဟေဠိဆန်စွာ သေခဲ့ပါတယ် ။ အခု သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ ဆို မွန်ရိုး လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားတာ အနှစ် ( ၅၀ ) ပြည့်ခဲ့ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် ယနေ့တိုင် အမေရိကန်ရဲ့ Pop Culture မှာ မာရီလင်မွန်ရိုးဟာ ထိပ်ဆုံးက နေရာယူဆဲ ၊ အမေရိကန်ရဲ့ ရုပ်ရှင်သမိုင်းက အအောင်မြင်ဆုံးများထဲမှာ ပါဆဲပါ ။
ကနေဒီရဲ့ ၄၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ မွန်ရိုးက Happy Birthday, Mr.President သီချင်းကို ဆိုစဉ် ။ ဒီအင်္ကျီကို ၁၉၉၉ မှာ လေလံပစ်တော့ ဒေါ်လာ ၁.၂၆ သန်းရခဲ့တယ် ။
စံပြမိသားစုဆိုတာ ဂလိုကိုး ( ကနေဒီနဲ့ သူ့ First Lady ...)
ကနေဒီနဲ့ မွန်ရိုး အိမ်ဖြူတော်ထဲက Oval Office မှာ ( ရှားပါးပုံမို့ အပိုင်း ၁ မှာ ရော ၂ မှာရော ထည့်ထားတာပါ )
သမ္မတကနေဒီနဲ့ သူ့အမျိုးသမီး ဂျက်ကလင်း ကနေဒီ Jacqueline Kennedy
ချီဂါကိုမှ မာရီလင်မွန်ရိုး ရုပ်ထုကြီးတည်ဆောက်ပုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။ ၂၆ ပေမြင့်ပြီး Stainless Steel နဲ့ ၂၀၁၁ မှာ ဆောက်ခဲ့တာပါ ။
August 4, 2012 at 11:05pm
Posted by Motethon Oo at Sunday, April 05, 2015
လှိုင်ဘွား / ၈၈ ( ၂၀၁၁)
မာရီလင် မွန်ရိုး ဘ၀နိဂုံးမှ ရွှေရတုတိုင် .............
Édouard-Henri Avrilအရုပ်ဖော်သော လူတို့ လှေကြီးထိုး ပုံစံ လိင်ဆက်ဆံပုံ ဇီဝဗေဒ အမြင်အားဖြင့် လိင် ဆက်ဆံခြင်း သည် အဖို လိင် အင်္ဂါ သည် အမ...
စိန်စီသောည(အဆက်) by Yeyint Nge on Sunday, December 25, 2011 at 2:03am မတ်လ ၃ ၂၀၀၈ ရက်နေ့က အမှတ် ၁၂၆၊ စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း၊ ကမ...
by FNG on December 8, 2011 ဟိန်းခိုင်ထွန်း၊ ၊ လိင်ဆက်ဆံ မှု မှာ ပါးစပ် နဲ့လုပ်တာ ကို ရှောင်ကျဉ် ဖို့အိ...
လူ့သဘာဝအရ လူသားဖြစ်သော ကျား(အဖို)နှင့် မ(အမ) တို့ ချိန်ခါရွယ်ရောက်ပြီးနောက် အကြင်လင်မယားအဖြစ် အိုးအိမ်ထူထောင်နေထိုင်လေ့ရှိရာတွင် အမဖြစ...
မို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ဖော်ပြမှု၊ပေါက်သီချင်းနဲ့ ဆင်ဆာ & ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးသည့် KPCကိုအာဏာပိုင်များစောင့်ကြည့်နေ & လွမ်းစိမ့်
by စူ နာ မီ လှိုင်း on Friday, December 16, 2011 at 8:59pm -> ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲက ပေါက်သီချင်း -> ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ စည်းကမ်းပြောင်းပြ...
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ရန် ကြိုတင်တွက်ချက်ခြင်း
မည်သည့် စီးပွားရေးဘဲ လုပ်မယ်စိတ်ကူး ထားရှိပါစေ၊ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး တစ်ခုလုပ်တော့မည် ဆိုပါက ထိုလုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းအတွက် ရှေးဦးစွာ...
အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးအချို့ Sex ကိစ္စ မလိုလားရသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ လေးရပ်
by ဘဘကြီး ဘဘကြီး ဘဘကြီး on Thursday, September 1, 2011 at 3:26pm အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ Sex ကိစ္စမှာ စိတ်မဝင်စားဘဲ ငြင်...
Tuesday, August 9, 2011 12:18 PM | Posted by လူဗိုလ်ဟူသည် ...... by Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ ...
အာဏာရှင်ဆို ဘယ်လို အာဏာရှင်မှ ဒီကမ္ဘာမြေမှာ မရှိသင်.
Length: ‎19:44 DVB News Mirror and Rhythm Dec 25, 2011 8:51pm ...
လိင်ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး မိုးလေ၀သ သတင်းကြေညာသူ အမျိုးသမီး ၁၅ ဦး
Saturday, July 9, 2011 10:45 AM | Posted by လူဗိုလ်ဟူသည် ...... ကမ္ဘာပေါ်က သတင်းဌာနတွေ အားလုံ...
မုတ်သုံကို မြန်မာ တမျိုးသားလုံး
စပြီးရွှာတာနဲ့မိုးဦးစပြီဆိုတာနဲ့ 
နွေရဲ့ခြောက် သွေ့ မူတွေနေရာမှာ
စိမ်းလမ်းတဲ့ သစ်ပင် မြက်ပင်
မိုးဦးကျ (မုတ်သုံမိုးဝင်ကာစမှာ )
ကလေးတွေကအစ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်လို့ 
သူတို့ နဲ့ အတူ မြန်မာ့မြေမှာ
သစ်ပင် မှို စတဲ့ စိမ်းလမ်းမူတွေ
အစို့ အညှောင့် ပေါက်ကြတယ်။
ကို တင်ပေးတယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်
လူတိုင်းနဲ့ မခြားတဲ့ လူသား
Reuters သတင်းထောက်နှစ်ဦး အမှု ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ CPJ နဲ့ AHRC တောင်းဆို
Welcome To JBCS
Pastor's Corner 143
သူရိယ သတင်းဂျာနယ် - Free Burma Media
အမှောင်ထုထဲက အလင်းစက်များ: ဧရာဝတီ ကို ကာကွယ်ကြစို့ (နေ့ သစ်မှ ဝေမျှခြင်း)